Tsy anavahana | NewsMada
Raha ny vaovao tato ho ato, mirongatra ny fanimbana ny ala sy ny trafika hazo manerana ny faritra maro eto amin’ny Nosy. Ao ny milaza fa fahita rehefa fotoam-pifidianana izany ka be ny mpanararaotra. Raha izany no izy, azo raisina fa efa fihantsiana ny fanjakana sy ny tompon’andraikitra mihitsy ny ataon’ireo mpanimba ny harena voajanahary. Hentitra ny filoham-pirenena nanome toromarika fa tsy azo leferina intsony ny fandripahana sy ny fanaovana trafika ny harem-pirenena rehetra. Tsy nitsitsy koa ny filoham-pirenena naneho ny ady amin’ny kolikoly.
Maro ireo tratra sy voarohirohy ary naiditra am-ponja fa mbola tsy vitsy koa ny manohy ny ataony. Tambajotra avokoa ny ankamaroan’ireny mpanapotika ny harem-pirenena ireny. Miainga any ifotony ny mpanimba na mpangalatra, ny mpandray, ny mpitatitra ary indrindra ny tompon’andraiki-panjakana sasany manara-maso na mikarakara ny antontan-taratasy, na manampy ny famoahana azy any ivelany na fivarotana azy eto an-toerana.
Midika ireo, fa tsy tokony hionona amin’ny fampahalalana na fisamborana olona iray na roa ny ady amin’ny fandripahana ny harena voajanahary. Mila fongarina isaky ny sehatra tsirairay, miainga any ifotony hatrany amin’ny tompon’andraikitra ambony. Tsy anavahana na manohana ny fanjakana na tsia, satria tsy vitsy koa ireo mialokaloka ao hiarovan-tena, ny hafa mirotsaka kandidà ho solombavambahoaka mba hialana amin’ny fanenjehana.
Fehiny, mila jerena akaiky ny mombamomba ireny olona toy ny amboadia mitafy hodi-janakondry ireny, satria manaratsy endrika ny tompon’andraikitra tena vonona hanao ny asany, sy ny filoham-pirenena mihitsy ary.